बिहान खाली पेटमा यस्ता चिज खादै नाखानुस, नत्र क्यान्सर होला…. – Tufan Media News
बिहान खाली पेटमा यस्ता चिज खादै नाखानुस, नत्र क्यान्सर होला….
१० मंसिर २०७६, मंगलवार ०८:०२
हामी दैनिक विभिन्न समयमा विभिन्न खालका खानेकुराहरु खाइरहेका हुन्छौं । बिहानै उठ्ने बित्तिकै खाजाको रुपमा धेरै प्रकारका खानेकुराहरु खाने गर्छौं तर यसरी खाइएका खानाहरु कतिपय स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छन् भने कतिपय अहितकर ।
हामीले बिहानै खाने कतिपय खानेकुरहरुले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने गर्छ । त्यसैले बिहानै खाली पेटमा हामीले कस्ता खानेकुरा खान हुदैन भन्ने कुरा राम्ररी जान्नुपर्छ । हामीले खाली पेटमा खान नहुने खानेकुराहरु यस प्रकार छन् ।